Akụkọ - Mmepe na itinye teknụzụ ọhụrụ maka akpụ oyi
Mmepe na itinye teknụzụ ọhụrụ maka akpụ oyi
1. Nnyocha ihe mmecha na ịme anwansị kọmputa
Nmepụta kọmpụta na nyocha mmewere nke ịkpụ oyi bụ ebe nyocha nyocha, na ebipụtala ọtụtụ akwụkwọ na nsonaazụ nyocha n'ụlọ na mba ofesi. Otu esi eme simulation kọmpụta maka nsogbu nrụpụta n'ezie na idozi nsogbu ụfọdụ kwesịrị ịbụ ebumnuche nyocha na ndabere maka nsonaazụ nyocha. Dika ezigbo nsogbu siri dị, anyị emeela nyocha ịme anwansị na ikpu ọkụ okpukpu abụọ na okirikiri dị n'ime, nyocha ntụpọ ebili mmiri nke efere dị obosara, na mgbagọ nke oghere a pịrị apị, wee mee nyocha nnwale dị mkpa.
1. Nmeghari okpukpu abụọ na okirikiri dị n'ime
N'ihe mejupụtara kpụrụ oyi, mpịachi ugboro abụọ bụ ụdị a na-ahụkarị. N'ichepụta mpịachi okpukpu abụọ, idozi mgbako nke obosara efere na ikpebi usoro nhazi usoro ezi uche dị na ya bụ isi okwu. Nkwubi okwu enwetara site na iji MSC Marc maka ịme anwansị nwere oke bụ ndị a:
(1) Site na nyocha ụdị nhatanha nke mpaghara nrụrụ, a na -achọpụta na n'oge usoro mbibi ahụ, na -ehulata ọzọ nke mpempe akwụkwọ ahụ, akwa na -anọpụ iche na -esi na etiti etiti pụọ wee banye n'ime gbagọrọ agbagọ. Ime anwansị ahụ na -enye usoro mgbanyụ na ọnụ ahịa akọwapụtara.
(2) Site na ntụnyere nke nkeji tupu na mgbe nrụrụ gachara, achọpụtara na n'oge mgbatị ahụ, ngalaba mpụga na -ebelata, akụkụ ime ime na -agbatị, ọkpụrụkpụ efere dị n'etiti gbagọrọ agbagọ na -abawanye, na ihe na -aga. .
(3) Site na nyocha nke nrụgide na nrụgide, a na -achọpụta na nrụrụ nke ngalaba na -ehulata dị nso na njirimara nke ụdị ụgbọ elu, yabụ a na -ekpebisi ike na ekwe ekwe nke mpempe akwụkwọ nwere ike ịdị mfe na nsogbu nsogbu ụgbọ elu.
(4) Site na nyocha nke mkpagide nrụgide na -ehulata, a na -ekpebisi ike na enwere nnukwu nrụgide nrụgide na mpụta mpụta, nnukwu nrụgide nrụgide na -ekwekọ n'ime ekwe, na enwere mpaghara mgbanwe n'etiti mpaghara ihu. na mpaghara na-adịghị ehulata (ma ọ bụ obere ebe gbagọrọ agbagọ). Nnukwu ịta ahụhụ nchegbu.
2. Nnyocha ntụpọ dị n'ichepụta nnukwu akwụkwọ
Ọgbọ nke ebili mmiri n'akpa uwe bụ nsogbu a na -enwekarị n'ịkpụ efere sara mbara. N'ime usoro ịgba oyi nke ngalaba dịka ogwe ihe ndị e ji ebu ihe, ogidi ndị nwere profaịlụ, na ọnụ ụzọ na-agbagharị obosara, ntụpọ ebili mmiri n'akpa uwe na-emekarị.
N'ime nnwale ahụ, e mere nchịkọta 18 nke nnwale dị ka ọkpụrụkpụ efere dị iche iche na nhazi mpịakọta, na ụdị ntụpọ atọ doro anya dị ka ebili mmiri akpa, ebili mmiri na ihu ihu ogologo ka nyochachara ma mụọ site na usoro ọgbọ na nsonaazụ nnwale. Ma wepụta usoro ndị dabara iji kpochapụ ntụpọ. Nkwubi okwu bụ isi dị ka ndị a:
(1) Ọgbọ nke ebili akpa na-abụkarị n'ihi omume nke akara de-line nke efere n'oge usoro a na-ehulata, na a na-ewepụta nrụgide ndọpụ uche na nrụgide transverse n'akụkụ akụkụ. Dabere na mmekọrịta Poisson nke nrụrụ nke ihe mpempe akwụkwọ, nrụrụ dị ntakịrị na -apụta na ntụzịaka ogologo, akụkụ nke ogologo oge na -arụ ọrụ na -arụgide akụkụ ahụ na -enweghị akwụkwọ, akụkụ etiti nke ihe mpempe akwụkwọ na -efunahụ nkwụsi ike na ebili akpa na -apụta. Ebili akpa bụ tumadi na -agbanwe agbanwe.
(2) Mgbe akpa akpa pụtara, enwere ike ịgbakwunye ngafe nke ọma. Obosara nke akụkụ ngalaba nwere mmetụta ụfọdụ na ebili mmiri n'akpa uwe, na efere dị gịrịgịrị na -adịkarị mfe na ebili mmiri n'akpa karịa efere dị arọ. Enwere ike ibelata ebili mmiri akpa site n'itinye esemokwu na mpempe akwụkwọ.
(3) Ọgbọ nke ebili mmiri nke ihu bụ ngwakọta nke mmetụta abụọ. Nke mbụ bụ otu ọgbọ nke ebili mmiri akpa. Nke abụọ bụ na ihe dị na nsọtụ ngalaba ahụ bụ nke mbụ agbatịpụrụ ma kpachapụ ya n'okpuru ike nke mpụga, ọzọkwa mkpakọ na ịkwa osisi na -emepụta nrụrụ plastik ma bute ebili mmiri. Mmetụta abụọ a karịrị ibe ha, na -ebute ebili mmiri n'akụkụ. Ebili mmiri nwere ike ime na ngafe ọ bụla, ngafe gara aga na -enwe mmetụta dị ukwuu n'ọdịdị ebili mmiri. Mpekere ndị dị gịrịgịrị na -adịkarị mfe ebili mmiri karịa efere dị arọ, akụkụ ya sara mbara na -adịkarị mfe ebili mmiri karịa ọnụ wara wara.
3. Nnyocha ịme anwansị na mgbagọ nke oghere a kara aka
Otu n'ime ntuziaka mmepe nke ngwaahịa kpụrụ akpụ bụ ịnọgide na-egbo mkpa nke ngwa dị iche iche wee ghọta ọtụtụ ọrụ na ngwaahịa. Ọ dị mkpa ka ebu ụzọ tụọ profaịlụ kọlụm kọlụm kọlụm, profaịlụ shelf, wdg. N'ihi na a chọrọ oghere oghere na jiometrị oghere ka ọ dị elu, a naghị ekwekwa nnukwu nkwarụ n'oge usoro ịgba ya, nyocha ịme anwansị na usoro njikwa nke mgbagọ nke ọdịdị oghere etinyere na mbụ dị ezigbo mkpa.
N'iwere mpempe akwụkwọ a pịrị apị dị ka ihe atụ, a ga-enweta usoro ọhụụ iji chịkwaa mgbagha ọdịdị oghere n'ime usoro ihu igwe oyi nke akwụkwọ mpempe akwụkwọ a na-ebu ụzọ na-enweta site na nnwale ubi, a na-enyocha usoro mgbagọgịgị ụdị oghere, yana nsonaazụ nnwale bụ chịkọtara. N'otu oge ahụ, ejiri sọftụwịa simulation kọmputa mee ka ọ dị ka usoro nrụpụta, yana nsonaazụ nnwale ubi ka atụnyere nsonaazụ simulation kọmputa.
Dika eserese usoro, egosipụtara nsonaazụ simulation, a na -egosipụta ogo mbibi nke akụkụ ihe ahụ site na eserese igwe ojii na akụkụ ya, nke na -atọ ntọala maka nghọta ọzọ gbasara iwu nrụrụ n'oge usoro ịtụgharị.
Site na ntụnyere nsonaazụ simulation nke ọnwụ dị iche iche, a tụlere mmetụta nke ọnwụ dị iche iche na nchekasị na nsogbu nke mpaghara ihe a kụrụ tupu amata ya, wee nweta atụmatụ kacha mma dabara maka nnwale ahụ.
Site na nyocha nke ọnọdụ nrụgide na ọnọdụ nrụgide nke akụkụ nke ihe mpempe akwụkwọ a haziri ahazi, a na-ahụta isi ihe kpatara nkwarụ ụdịdị oghere: ihe kpatara mgbagọghere nke oghere nke ihe mpempe akwụkwọ bụ: nsọtụ ntụmadị. mpaghara nke ihe ahụ ga -apụta n'oge a na -akpụzi ya Site na mmụba dị ukwuu na -abawanye, nrụgide nhatanha na mpaghara ịkụ ọkpọ na -eji nwayọ na -abawanye n'oge usoro igwe, ụdị ahụ na -agbakọkwa. Efere dị n'èzí akuku akpụpụtara akụkụ ahụ ebu ụzọ amịpụta mwepụ n'akụkụ. A na-egosipụta ya na oghere a kụrụ akụ tupu amịpụta nke na-ewepụta nnukwu mbugharị, wee mepụta mgbagha ọdịdị oghere. Mgbe ogo nchikọta gafere oke ike nke ihe ahụ, ịdọwa ga -eme.
Dabere na atụmatụ ịme anwansị kacha mma, a gbanwere eserese eserese mpịakọta, wee mee nnwale ubi. Nnwale na -egosi na enwere ike iji nsonaazụ simulation ahụ bụrụ ntọala maka imepụta ebu, ọ dịkwa oke mma izere imebi oghere.
2. Mmepụta ahịrị nke profaịlụ dị mgbagwoju anya dị elu
Akwụkwọ mpịakọta oyi na -atụ dabara adaba maka imepụta oke. E jiri ya tụnyere usoro ịgba, nrụpụta nrụpụta nke ụdị mpịakọta ụdị oyi akwa dị elu, nha ngwaahịa na-agbanwe agbanwe, ọ nwere ike ghọta ngalaba dị mgbagwoju anya nke enweghị ike imepụta ya. Site na mmepe ngwa ngwa nke ụlọ ọrụ ụgbọ ala nke obodo m, a na-achọwanye ụba maka ahịrị mmepụta oyi maka profaịlụ dị elu na nke dị mgbagwoju anya.
Maka ọnụ ụzọ ụgbọ ala na windo, akpụ oyi na -abụkarị usoro mbụ na igodo. Mgbe oyi na -ehulata, ọ ga -adị mkpa ka a kpachie ọtụtụ ọkwa igwe n'otu ebe dịpụrụ adịpụ. Yabụ, ahịrị mmepụta kwesịrị ịgụnye akụrụngwa ịgbado ọkụ na ntanetị, ngwa nsuso na ịcha, wdg.
Maka oyi na -ehulata na -emepụta ahịrị ụgbọ ala na windo, ọ bụghị naanị na ọ nwere ọtụtụ ihe na -akpụfe kamakwa ọ chọrọ oke nkenke. Anyị chịkọtara ma wepụta ihe ngosi iri karịa maka ịchịkwa na inyocha izi ezi nke igwe igwe nri na -atụgharị, na -elekwasị anya n'ịchịkwa ngagharị axial nke igwe mpịakọta na izi ezi nke datum ọnọdụ axial na nkeji niile.
Chepụta usoro ịkpụzi n'ụzọ ezi uche dị na ya, wee chọpụta usoro ịkpụzi kacha mma site na ịme anwansị na sọftụwia COPRA. N'iji teknụzụ CAD/CAM rụpụta mpịakọta dị nkenke, agbagoro ọtụtụ profaịlụ dị mgbagwoju anya nke ọma.
Ngwanrọ COPRA nke ụlọ ọrụ German data M bụ sọftụwia ọkachamara maka imepụta akpụ oyi, a na-ejikarị ya eme ihe n'ụwa niile. Ndị isi ụlọ ọrụ na -ahụ maka ụlọ na -eji ya dịka ụzọ isi mepụta ngwaahịa ọhụrụ. Anyị arụpụtala nke ọma ma rụpụta narị narị ngwaahịa kpụrụ akpụ site n'itinye ngwanrọ a.
3. Ịntanetị na-ehulata profaịlụ emebere oyi
Ọtụtụ profaịlụ chọrọ arc akụkụ abụọ n'ogologo, na ịgbagọ n'ịntanetị mgbe etinyere ngalaba bụ ụzọ ka mma. N’oge gara aga, usoro a na -ejikarị bụ ịzọpịa ihe na ígwè e ji ebi akwụkwọ. Ọ dị mkpa ka a na -agbanwezi ebu ahụ ugboro ugboro. Mgbe Njirimara nke ihe ahụ gbanwere, ọ dị mkpa ka agbanwee ebu ahụ ugboro ugboro. Mkpa pịa kwesịrị ịwụnye cores ngwa ọrụ akọwapụtara n'otu n'otu iji zere ntụpọ dị ka ndọlị n'oge usoro ịgba. A na -ewepụ cores ndị a n'ime mgbe emechara, nke chọrọ nnukwu ọrụ, arụmọrụ dị ala na nchekwa adịghị mma.
Ịgbagọ naanị n'ịntanetị kwesịrị ịwụnye otu ngwaọrụ ekwe ekwe n'ịntanetị na ọpụpụ nke profaịlụ nwere oyi iji mee ka profaịlụ rute nha arc achọrọ. Enwere ike ịhazigharị ngwaọrụ ahụ iji dozie mmetụta nke ihe onwunwe dị iche iche na nlọghachi ihe. Ọ bụrụhaala na ọ bụ arc 2, ọ nwere ike gbagọrọ agbagọ na ntanetị n'agbanyeghị ụgbọ elu kwụ ọtọ ma ọ bụ na vetikal kwụ ọtọ.
Na usoro iwu, isi ihe 3 na -ekpebi arc. Mana iji nweta ịdị mma na -ehulata nke ọma, anyị kwenyere site na nnwale na ekwesịrị ikpebi ụdị trajectory ahụ site na usoro mgbagọ agbagọ.
A ga -ekpebi usoro nrụrụ a kapịrị ọnụ nke akụkụ okirikiri gbagọrọ agbagọ site na nha anya: ρ = -0 + αθ
Ma ọ bụ site na nhazi:
Nke anọ, teknụzụ agbakwunyere CAD/CAM iji rụpụta mpịakọta dị nkenke
Iji gbanwee afọ anyị nke rụpụtara nyocha sayensị ka ọ bụrụ nrụpụta ihe, ma nye ọrụ teknụzụ dị elu yana nkwado teknụzụ maka ndị ọrụ ụlọ na ndị si mba ọzọ, e guzobere RlollForming Machinery Co., Ltd. na Shanghai. Ịnabata teknụzụ njikọta CAD/CAM iji nye ndị ahịa ụlọ na ndị mba ọzọ ọrụ zuru oke. Liju nwere ọtụtụ igwe igwe CNC na akụrụngwa nhazi zuru oke, na-enye ndị ọrụ nkọwa dị iche iche nke mpịakọta dị nkenke na ihu ihu n'ịntanetị yana akụrụngwa ndị ọzọ metụtara ya.
N'ịdabere na uru nke ụlọ ọrụ Shanghai na Delta Delta Yangtze, a na-arụkọ ọrụ ọnụ ụlọ na nke mba ọzọ iji kpokọta ma zụọ ihe dị elu, ikike dị elu, na njikwa sayensị nke oge a nwere ike inye ndị ahịa ngwaahịa na teknụzụ dị elu. ọrụ. Liju na-ewere nke a dị ka ebumnuche ịzụlite na ọganihu yana ụlọ ọrụ na-akpụzi oyi nke mba m.
Oge ezipụ: Apr-25-2021